မတ်လ 2017 | 20 ၏စာမျက်နှာ 88 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 20)
1 / 28 / 350 အပေါ် posted 03st သေနတ်သမား-ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီး, OK ကို Duration: အင်္ဂါနေ့မတ်လ 22 လစာ $ 17 / နေ့ကယောဘ 03 / 28 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့က Los Angeles မြို့များမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့5+ စီးပွားဖြစ်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာနှစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဇာတ်ကြောင်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့အလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့် & အတွေ့အကြုံရှိအသင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုရှာကြံစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီနဲ့ပါတ်သက် ...
အလွတ်တန်း Filmmaker နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ
အလွတ်တန်း Filmmaker နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Menlo Park, CA Duration: စာချုပ်လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 03 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကျနော်တို့၏တိုတောင်းသောဗီဒီယိုလုပ်နိုင်သူတစ်ဦးလွတ်လပ်သောဖန်တီးမှုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ, ရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား အင်တာနက်နာမည်ကြီး Casey Neistat ဖွငျ့ဗီဒီယိုများဆင်တူစတိုင်။ ကျနော်တို့လုပ်မယ့် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ချီကာဂို, IL Duration: 1 နေ့က -4/ 12 / 03 အပေါ် posted 22 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘတစ်ပွင့်လင်းကာစ်တင်ခေါ်ရန်အဘို့အ pas ရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 04 / 12 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ။ သူတို့ကလေးတွေနှင့်မိဘနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် "walkie" လောကဝတ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် Self-င်, ဖြစ်ရပါမည်။ သူတို့ရဲ့အပေါ်ဖွဲ့စည်းနှင့်အမြန်ရမည်ဖြစ်သည် ...
motion ဂရစ်ဖစ်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:5ရက်အလုပ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများပါဝင်သည်အကြောင်း, 03 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် asap လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘဝေမျှရန်ပေးမစတင်သည်: - Highly ကျွမ်းကျင်ဆိုးကျိုးများနှင့် photoshop ပြီးနောက်အတွက် - သရုပ်ဖော်၏အခြေခံအသိပညာ - ပြပွဲများအတွက်ထုံးစံဂရပ်ဖစ် packages များဖန်တီးပေးရန်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း - လှုပ်ရှားပုံများ ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Dallas မြို့, တက္ကဆပ် Duration: 1 နေ့က -4/ 8 / 03 အပေါ် posted 22 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘတစ်ပွင့်လင်းကာစ်တင်ခေါ်ရန်အဘို့အ pas ရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 04 / 08 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ။ သူတို့ကလေးတွေနှင့်မိဘနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် "walkie" လောကဝတ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် Self-င်, ဖြစ်ရပါမည်။ သူတို့ရဲ့အပေါ်ဖွဲ့စည်းနှင့်အမြန်ရမည်ဖြစ်သည် ...
29 / 30 / 31 အပေါ် posted အသံ Recordist ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဝါရှင်တန်ဒီစီ Duration: မတ်လ 400, 03 နှင့်စီမံကိန်း DOE ယောဘသည်နှုန်း 22 လစာ $ 17 03 / 29 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့ကရှာကြံနေသောအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား အရည်အသွေးအသံမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကို client စီမံကိန်းကိုအပေါ်နှင့်အတူပူးပေါင်း recordist ။ ကျနော်တို့ကအလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော, ဖွဲ့စည်း, အတွေ့အကြုံရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေနေကြသည်။ ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Charleston, SC Duration:2ရက်,3/ 27 / 03 22 / 17 / 03 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အသံရောနှော + ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 27 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးများအတွက်ကိရိယာအစုံ။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? >> ပိုအတွက် Sign ကျေးဇူးပြု.
3 / 30 /3အပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Orlando တွင်, FL Duration: 31 / 10 နှင့် 03 / 22 လစာ $ 17 / နာရီယောဘသည် 03 / 30 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အတွေ့အကြုံရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား3/ နာရီတစ်မှုနှုန်းအဘို့အ 30 /3နှင့် 31 / 10 အပေါ်စသည်တို့ထုတ်လုပ်မှုတင် / ချဂီယာနှင့်အတူကူညီပေးဖို့လက်ထောက်, ပရိယာပြေး, ထုတ်, ကင်မရာကိုကူညီပေးနေကူညီပေးနေ။ ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုပြု ...
20 ၏စာမျက်နှာ 88«ပထမဦးစွာ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး»